ओली सरकारलाई झट्का ! पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो « GDP Nepal
ओली सरकारलाई झट्का ! पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो
Published On : 29 August, 2018 6:34 pm
काठमाडौं । चीनबाट ठूलो लगानी ल्याउने सरकारी प्रयाशमा झट्का लागेको छ । नयाँ लगानी त परैको कुरा यसअघि नै नेपाल भित्रिन धेरै तयारी पूरा गरिसकेको एक चिनियाँ कम्पनी सरकारको अपरिपक्वताकै कारण फर्केको छ ।
बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको छ । चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) र लगानी बोर्डबीच भएको वार्ता असफल भएको छ । क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन कम्पनीले अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
चिनियाँ प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा लगानी बोर्डले यसपटक परियोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटबाट घटाएर ६ सय मेगावाटमा झार्न सहमति दिएका थिए । यस्तै, अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन मानेन । प्राविधिक, पुनर्वास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तिय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको छ ।
यसरी सरकारको २०६८ सालदेखिको मेहनतसमेत खेर गएको छ । थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै काम अघि बढाएको थिएन । यसअघि आफैं ६०० मेगावाटमा बनाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा समेत अहिले उक्त कम्पनी सहमत भएन ।